Jaamka Degmada Qaw ee Gobolka Bari oo Dib loo Furay – Radio Daljir
Jaamka Degmada Qaw ee Gobolka Bari oo Dib loo Furay
Abriil 30, 2017 3:12 b 0
Degmada Qaw ee gobolka Bari oo taal xeeb ka hoosaysa buuraleyda ku teedsan deegaanka ayaa maanta daaha ka rogtay JAAMKA. Jaamku waa kanaaal biyaha u gudbinaya badda. Jaamka ayaa horay waxaa u xiray bacaad iyo dhagax dabayluhu keeneen.
Guddoomiya degmada Qaw, Rashiid Xabiib Jaamac, ayaa Idaacadda Daljir u sheegay in kambaniga SOOLA uu hawsha qabtay, una qabtay si tabarucaad ah. Guddoomiyuhu wuxuu kale oo sheegay in uu socdo dhismaha iskool barashada badda, deegaankuna uu hadda u heelan yahay horumar iyo horusocod. Waxaa waraystay Xuseen Madar.
Hiigsi & Hayaan: Taxanaha 13aad iyo Wariye Cabdifataax Cumar Geeddi